DHAGEYSO Wasaarada maaliyada Soomaaliya oo sheegtay inaan wali la dhamaystirin qorsha daabacada lacag cusub. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Wasaarada maaliyada Soomaaliya oo sheegtay inaan wali la dhamaystirin qorsha daabacada lacag cusub.
Anwar Mohamed October 5, 2018
Wasiirka wasaarada maaliyada dowlada fedraalka Soomaaliya DR C/raxmaan Ducaale bayle oo ka hadlay hanaankaa y dowlada Soomaaliya ku doonayso inay ku soo daabacdo lacago Cusub oo shilin Soomaali ah ayaa sheegay inay wali jiraa waxyaabo badan oo dhiman hadii aan la dhamaystirina aysan suuroobayn in lacagta cusub la soo saaro.
DR C/raxmaan Bayle Wasiirka Maaliyada Soomaaliya wuxuu sheegay in dowlada lagu xiray sharuudo fara badan oo ku saabsan soo taabicida lacagta Cusub taasoo qayb ka ah caqabadaha ay hada dowladu wajahayso ee ku aadan in la soo saaro lacag Soomaaliya ay yeelato oo cusub.
Wasiir Bayle wuxuu dhanka kale qiray in dhamaan sharuudahaas kuwoodii ugu muhiimsanaa ay dowlada Soomaaliya soo buuxisay balse ay dhiman yihiin kuwo kale oo ku xiran soo daabicida lacagtaan taasoo ay ka mid tahay dhaqaalihii loo adeegsan lahaa soo saarida lacagta Cusub oo ay dowladu hada dadaal ugu jirto sidii lagu helilahaa.
Dowlada dhexe ee Soomaaliya ayaa dadaal xoogan waxay ugu jirtaa sidii dib loogu soo noolayn lahaa lacagtii shilinka Soomaaliga ahayd oo wadanka loogu samayn lahaa lacag cusub oo qayb ka noqodo kobaca dhaqaalaha iyo dhamaan dhaqdhaqaaqyada dalka Soomaaliyeed
← Madaxweynaha dalka oo sheegay in horumar laga gaaray sayniska iyo teknoolojiyadda
Hay’adda laanqeerta cas oo guriyo u dhisi doonto qoysaska ay fatahaadaha saameyeen →